MIUI 10 တင်ပြီးရင် Single Lens Portrait ရလာမယ့် Xiaomi ဖုန်းတွေကဘာတွေလဲ?
8 Jun 2018 . 3:33 PM
Xiaomi ကနေမနေ့တုန်းက သူတို့ရဲ့ MIUI 10 Operating System အသစ်ကို Redmi Y2 စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ Global အနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုဒီ MIUI 10 ဟာ Android Version ကို Update ဖြစ်သွားစေမှာတော့မဟုတ်ပေမယ့် Xiaomi ဖုန်းတွေကို အဆင့်တိုးတက်သွားစေမယ့် Feature တစ်ခုတော့ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Single Camera ပါဝင်နေပေမယ့်လည်း Portrait ရိုက်ကူးနိုင်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
MIUI 10 Portrait on MI 5
Xiaomi ရဲ့ ပြောကြားချက်အရတော့ အခုလိုမျိုး Dual Camera တွေမလိုအပ်ပဲနဲ့ Single Camera နဲ့ပဲ Portrait ရိုက်ကူးနိုင်အောင် ဓါတ်ပုံပေါင်း ၁ သိန်းကျော်ကို AI နည်းပညာနဲ့လေ့လာထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး MIUI 10 ကို Update လုပ်ပြီးတာနဲ့ Single Camera Portrait ရရှိမယ့် Xiaomi စမတ်ဖုန်းတွေကတော့ Mi Mix2၊ Mi 5s/Mi 5s Plus ၊ Mi5၊ Mi Note2၊ Mi Max ၊ Mi Max2၊ Redmi Note4၊ Redmi Note 4X ၊ Redmi Note3၊ Redmi5နဲ့ Redmi 4/4X ဖုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
MIUI 10 Portrait
အခုဖုန်းတွေက Back Camera မှာ Portrait Feature ရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Front Selfie Camera Portrait ကတော့ Mi6နဲ့ Redmi Note5စမတ်ဖုန်းတွေပဲ အစောပိုင်းအနေနဲ့ ရရှိလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် MIUI 10 ဟာ Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံး OS တစ်ခုဖြစ်လာဦးမှာပါ။
Xiaomi ကနမေနတေု့နျးက သူတို့ရဲ့ MIUI 10 Operating System အသဈကို Redmi Y2 စမတျဖုနျးနဲ့အတူ Global အနနေဲ့ ထုတျပွနျကွညောလိုကျပွီပဲဖွဈပါတယျ။
အခုဒီ MIUI 10 ဟာ Android Version ကို Update ဖွဈသှားစမှောတော့မဟုတျပမေယျ့ Xiaomi ဖုနျးတှကေို အဆငျ့တိုးတကျသှားစမေယျ့ Feature တဈခုတော့ပါဝငျနပေါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ Single Camera ပါဝငျနပေမေယျ့လညျး Portrait ရိုကျကူးနိုငျစတောပဲဖွဈပါတယျ။
Xiaomi ရဲ့ ပွောကွားခကျြအရတော့ အခုလိုမြိုး Dual Camera တှမေလိုအပျပဲနဲ့ Single Camera နဲ့ပဲ Portrait ရိုကျကူးနိုငျအောငျ ဓါတျပုံပေါငျး ၁ သိနျးကြျောကို AI နညျးပညာနဲ့လလေ့ာထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး MIUI 10 ကို Update လုပျပွီးတာနဲ့ Single Camera Portrait ရရှိမယျ့ Xiaomi စမတျဖုနျးတှကေတော့ Mi Mix2၊ Mi 5s/Mi 5s Plus ၊ Mi5၊ Mi Note2၊ Mi Max ၊ Mi Max2၊ Redmi Note4၊ Redmi Note 4X ၊ Redmi Note3၊ Redmi5နဲ့ Redmi 4/4X ဖုနျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
အခုဖုနျးတှကေ Back Camera မှာ Portrait Feature ရရှိလာမှာဖွဈပွီးတော့ Front Selfie Camera Portrait ကတော့ Mi6နဲ့ Redmi Note5စမတျဖုနျးတှပေဲ အစောပိုငျးအနနေဲ့ ရရှိလာဦးမှာဖွဈပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ MIUI 10 ဟာ Xiaomi ဖုနျးတှအေတှကျတော့ အကောငျးဆုံး OS တဈခုဖွဈလာဦးမှာပါ။